Balancing tourism marketing and security needs |
Tsindrio eto na aforeto hatrany hatrany mba hahalalanao hoe iza no tiantsika :)
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Mampifandanja ny filan'ny fizahantany sy ny filan'ny filaminana
Mahatsiaro tena hambom-po tanteraka anio hariva taorian'ny fandefasana vanim-potoana milamina. Miaraka amin'ny Legacy b…
@plutheus @Valerie_Storm Tsy dia naninona i Tom raha tsy tamin'ny boky faharoa…
Emily Blunt miaraka amin'ny mpanakanto makiazy Evelyne Noraz ao ambadiky ny sehatry ny Jungle Cruise
[email voaaro], @Amaliajaja, @AshleyNicWill ary ilay mpamorona Eliot Laurence miresaka…
ahoana raha nanao mpanjaka tafio-drivotra aho…
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Hotels & Resorts • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Naotin'i Resort • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona • News News
Jolay 3, 2021
Dr. Peter Tarlow dia nizara ny eritreriny momba ny fandanjana ny varotra fizahan-tany sy ny filan'ny filaminana
Tamin'ny fahavaratra lasa teo, ny indostrian'ny fizahantany dia tsy hoe niaina fanovana paradigma marketing lehibe fotsiny, fa nahita azy tao anatin'ny krizy ratsy indrindra teo amin'ny tantarany.
Na dia hatramin'ny faramparan'ny folo taonjato faharoapolo aza, dia tsy fahita firy ny maheno ireo tompon'andraikitra fizahan-tany milaza ny ahiahin'izy ireo fa matahotra izy ireo fa be loatra, na hita loatra, ny fomba fiarovana ny fizahantany dia hitarika fahatahorana ny mpitsidika sy fampidinana fidiram-bola.
Avy eo dia nanjary zava-misy ny COVID-19, ary nanjary zava-dehibe ny endrika fiarovana rehetra.
Ny taonjato fahiraika amby roapolo taona voalohany tamin'ny folo taona fahatelo dia nanova ny eritreritra rehetra taloha.
Ao anatin'ny tontolo mampidi-doza ankehitriny, ny mpitsidika sy ny mpizahatany dia nitaky ny hahafantatra izay fepetra fiarovana sy fahasalamana noraisina, ny fomba fiheverana ny fiarovana azy ireo, ary iza no hitodihana raha sendra vonjy maika.
Manaiky ny manampahefana fizahantany maoderina fa misy ny fiovan'ny paradigma ifotony amin'ny indostrian'ny fizahan-tany ary tsy hijanona intsony ny fiheverana taloha. Noho ny fametrahan'ny governemanta fanakatonana marobe sy ny filana miasa any an-trano, ny fiainana miaraka amin'ireo eritreritra momba ny orinasa taona vitsivitsy lasa izay dia mampidi-doza tokoa ary mety hiteraka fahasamihafana eo amin'ny fahaveloman'ny orinasa sy ny tsy fahombiazany.
Ireo orinasa sy fikambanana ao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany izay mandray sy manasongadina ny fandriam-pahalemana dia hanana vintana lehibe ho tafavoaka velona ary ao anatin'izany ny ampahany amin'ny indostria, toy ny valan-javaboary, izay mifandray amin'ny governemanta. Ireo toerana manome manome fiarovana tsara mifangaro amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara dia manana vintana kokoa hatanjaka sy ho velona. Na dia tsy misy afaka mamokatra filaminana tanteraka aza, tsy fantatsika koa izay fanamby miandry anao, ny teknika hita etsy ambany dia mety hanampy anao ho lasa tanjona kely kokoa sy hahasitrana haingana kokoa. Afaka manampy anao hampiasa fiarovana, fiarovana ary fahasalamana izy ireo ho fitaovana marketing. Ny lakile dia ny manomboka amin'ny fahombiazana azo tratrarina sy ny fampiasana ireo fahombiazana ireo mba hananganana momentum.
• Ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ary ny fahasalamam-bahoaka dia mety misy heviny samy hafa amin'ny siansa sy ao amin'ny governemanta amerikana, saingy amin'ny tontolon'ny dia iray dia iray ihany izy ireo. Ao amin'ny lahatsoratra-Covid vanim-potoana dia zava-dehibe ny fahafantarantsika fa ny rano misy poizina, ny fahadiovan'ny fahadiovana ary ny poa-basy dia manana vokatra mitovy: ny fanapotehana ny orinasanao fizahantany. Zava-dehibe ny fahafantaran'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahantany ny fifandraisana misy eo amin'ny fitantanana ny risika sy ny filaminana. Izy ireo dia lafiny roa amin'ny vola iray ihany. Ireo toerana izay mahazo dokambarotra ratsy be, tsy ara-drariny na tsy ara-drariny, dia tsy maintsy miasa hanovana ny fahitana raha manantena ny ho velona izy ireo.
• Miara-miasa ny fanatsarana sy fiarovana. Rehefa milamina ny tontolo iainana dia mahatsiaro voaro koa ny mpitsidika. Fantatry ny matihanina mpiaro ny fizahan-tany fa ny fiarovana tsara dia manomboka amin'ny a fahitana ny fiarovana. Amin'ny fanadiovana ny arabe, ny fambolena voninkazo, hazo ary zaridaina kely manodidina ny tanànanao, dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny fahafaha-manao heloka bevava ianao fa mampitombo ny fanirian'ny mpitsidika handany fotoana amin'ny fiarahamoninao. Hamarino tsara fa rehefa mizaha faritra ianao hanao izany mifanaraka amin'ny fitsipiky ny CPTED (fisorohana ny asan-jiolahy amin'ny alàlan'ny famolavolana tontolo iainana).
• Mitandrema amin'izay olona nofidinao hanasa ao amin'ny fiarahamonina misy anao hanome torohevitra. Ireo manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana ny fizahantany dia tsy maintsy mahafantatra ny fizahantany sy ny filaminana. Betsaka ny oniversite manome taranja fizahan-tany nefa vitsy no mahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fizahantany sy ny fizahantany. Asao ny olona afaka manampy vondron'olona iray tsy hamaha olana fotsiny fa hampiroborobo ny fahitana. Ny fiarovana ny fizahantany dia mety ho fitaovana marketing raha toa ka ampahany amin'ny fahitana tanteraka an'ny fiarahamonina izany. Midika izany fa ny fahitana dia tsy maintsy eken'ny manintona eo an-toerana, ny mpanao politika, ny sampan-draharahan'ny polisy, ny mpamaly voalohany, ny fitantanana hotely, ny tompon-trano fisakafoanana ary ny tompon'andraikitra fizahan-tany.
• Aza mamorona fahatsapana fiarovana sy filaminana diso mihitsy raha resaka fahasalaman'ny mpitsidika. Aza mampanantena mihitsy ny zavatra tsy vitanao. Mitranga ny loza ara-barotra rehefa tsy mifanaraka amin'ny andrasana ny zava-misy. Ampiofano sy omano ny vondrom-piarahamoninao mba ho voaro sy tsy hanana ahiahy. Ny resaka filaminana tsara dia tsy resaka maska ​​fandrehitra fa resaka lojika tsotra. Hamarino raha marina ny famantarana nataonao, diniho ny lamina fifamoivoizana ary omeo ny vaovao momba ny fizahan-tany sy ny laharana vonjy maika.
• Mamolavola ezaka fiaraha-miasa amin'ny polisy sy sampana mpamono afo any an-toerana, mpamatsy fanampiana voalohany, mpitsabo ary hopitaly. Hamarino tsara fa ireo mpamaly voalohany anao, na ny daholobe na ny mitady tombom-barotra dia samy mahalala ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny fizahantany amin'ny fizahan-tany. Ohatra, ny ankamaroan'ny polisy dia mbola tsy nahazo fiofanana momba ny fiarovana ny fizahantany. Zava-dehibe ny fananana olona iray hiara-hiasa amin'ny polisy eo an-toerana, ny fiarovana manokana, ny tobin'ny fiara mpamonjy voina ary ny sampana fanampiana vonjy taitra izay afaka "mandika" eo amin'ny resaka fizahan-tany sy fiarovana. Ny ankamaroan'ny tompon'andraikitra fizahan-tany dia tsy mahatsapa fa ny polisy sy ny sampana mpamono afo dia manaraka ny fomba fiasa hentitra ataon'ny birao Weberian. Raha tsy manohana ny politikam-piarovana ny fizahan-tany sy ny fampiofanana ny manamboninahitra ny fitantanan-draharahan'ny departemantan'ny polisy, dia kely ny mety ho fiarahan'ny polisy miasa. Ampio ny sefonao hahatakatra fa ny fiarovana ny fizahantany dia orinasa tsara tsy ho an'ny fiarahamonina ihany fa ho an'ny departemanta misy azy koa. Ohatra, departemanta polisy be loatra no mbola mino fa ny hahazo vola ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana tapakila fifamoivoizana. Asao ny governemantan'ny tananao hanazava amin'ny departemantan'ny polisy fa ny politika toy izany dia tsy lany andro fotsiny fa tsy mamokatra.
• Manolora seminera ho an'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana sy fiarovana anao. Ny sampana mpamaly voalohany dia vonona kokoa hanampy amin'ny fiarovana ny fizahan-tany raha mahita ny tombony azony koa izy ireo. Asehoy azy ireo ny fomba ahafahan'ny tombony azo avy amin'ny fizahan-tany manampy amin'ny fividianana fitaovana vaovao, mamatsy toerana vaovao na manampy ny tetibolany.
• Amporisiho ireo matihanina mpiaro ny fizahan-tany sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana mba hanatrika fihaonambe fizahan-tany ho an'ny daholobe sy ny eo an-toerana Ny fihaonambe fiarovana ny fizahan-tany tranainy indrindra sy malaza indrindra dia atao isan-taona any Las Vegas. Amin'izao fotoana izao dia maro amin'ireo fihaonambe mivantana ireo no vao velona indray taorian'ny tsy naha-iray taona azy noho ny areti-mandringana. Ny CVB lehibe rehetra dia tokony hanana solontena amin'ny kaonferansa fiarovana ny fizahantany miaraka amina mpikambana iray ao amin'ny maso ivoho mpampihatra lalàna.
• Fantaro izay tsy azo antoka eo amin'ny fiaraha-monina misy anao ary hiaraha-miasa amin'ireo governemanta eo an-toerana hanatsarana ireo olana ara-piarovana ireo. Manao ahoana ny fiarovana ny seranam-piaramanidina misy anao? Hadihadiana ve ny fiavian'ireo mpiasan'ny hotely sy ny trano fisakafoanana? Impiry isika no mijery ny lalàna mifehy ny fahasalamana nohavaozina? Impiry impiry ny mpamily taxi no mibaiko na tsy manadio ny fiarany? Manome ny mpanjifany amin'izay ampanantenainy ve ireo orinasa mpizahatany? Impiry no angalarina ny laharan'ny carte de crédit amin'ny ampahany amin'ny scam amin'ny maha-izy azy? Inona no olana amin'ny fiarovana cyber misy na mety misy?
• Fantaro hoe iza no mianatra any amin'ny oniversite eo an-toerana anao, indrindra amin'ny taranja injeniera ary iza no mampiasa ny asany akademika ho lasa fitsikilovana. Ireo mpianatry ny oniversite dia mihetsika eo amin'ny fiaraha-monina toa ny mpitsidika lavitra. Oniversite maro no mampiantrano mpianatra vahiny, izay tsy dia fantany firy. Ny mpianatry ny oniversite ve dia tsara na ratsy amin'ny fiarahamonina misy anao? Ny mpianatra vazaha any ihany no natao mba hianarana ihany sa koa manao iraka mpitsikilo miafina? Ireo matihanina amin'ny fizahantany dia tokony hiara-miasa amin'ireo mpitantana ny oniversite sy ireo manam-pahaizana manokana momba ny fiarovana mba tsy hihoatra ny lalàna, fa mba hanana hevitra tsara momba izay ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo ary inona avy ireo antony.